Ukrainian Airlines: Gweta-kirasi gweta rinotaura kwaari eTurboNews
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Ukrainian Airlines: Gweta-kirasi gweta rinotaura kwaari eTurboNews
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • wedzero • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Iran Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kirasi-yekumhan'ara mhosva inopokana neUkraine Airlines nevamwe ndezve chigunwe chakaiswa muCanada mushure meva 176 vafambi vakaurayiwa paPF752 pamusoro peIran. Ndiani ane mutoro? Ndiani anofanira kubhadhara?
The Hurumende yeIran, Ukraine International Airlines, YeAustria Ndeges, Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, uye / kana iyo Hurumende yeUS. Rekodhi muripo wemhuri dzevafambi vendege vangakweretwe.
Mr. Tom Arndt at Himelfarb Proszanski gweta muToronto, Canada, akataura na eTurboNewmuparidzi Juergen Steinmetz nhasi. Mr. Arndt ndemumwe wemagweta ari muCanada yekumhan'ara-kumhan'ara kumhan'ara kuToronto kune vakawirwa nendege yeUkraine Airlines yakapfurwa pamusoro peTehran, Iran.
Mr.Arndt vakapfupikisa nyaya dziripo eTurboNews:
Ndege PS752 haifanire kunge yakasimuka. Aingova maawa mana chete Iran yapfura zvombo kumabheseni eUS muIraq.
Iran yakanga yakagadzirira zvachose kudzorera kweUS uye nehondo yakazara.
Ndege pamwe nevemakambani vane masimba vaifanira kunge vakarambidza ndege dzese.
Isu takaparura ino kirasi-chiito kuunza ruramisiro uye muripo kumhuri dzakabatwa nedambudziko rinotyisa iri.
Tinotarisira kuti Iran uye nendege yeUkraine iripire mhuri kurasikirwa kwavo. Hatigone kudzosa vafambi, tinoshuva kuti dai takadaro. Ivo vakoma, vanin'ina, vanamai, vanasikana, vanababa, vanakomana, vana babamunini uye vazukuru havasi kudzoka. Mhosva iyi ndiyo yatingaite kutsvaga kururamisira uye muripo wekurasikirwa kwavo
Tinoshuvira kuwana kururamisira uye muripo pachinzvimbo chevafambi nemhuri dzavo.
Iran yakabvuma kuti yakapfura ndege. Iri idanho rekutanga rakasimba. Ndege yeUkraine haisati yatora mutoro. Isu tinotarisira kushanda kuburikidza nematare kuti titsvage kururamisira uye muripo wemhuri. Vazhinji vanhu vakanaka uye vakanaka pasirese vatangisa maitiro.
Funga nezve mukana waive mundege iyi. Yese yakadzimwa.
Hatigone kudzosa vakaurayiwa.
Zvatinogona kuita, kuunza ruramisiro uye muripo kumhuri dzavo uye vadikanwa. Ino inguva yedu yekubatsira. Aya ndiwo mabatiro atingaite.
Tom Arndt akati: "Tichatevera Hurumende yeIran, Islamic Revolutionary Guard Corps, neUkraine International Airlines muchikamu chino chedu chematare edzimhosva chatiri kuda kuisa muno muCanada."
“Vanachiremba vadiki vazhinji, vadzidzi vekurapa vane zviroto zvikuru, uye mhuri vakanyangarika muna Ndira 8, 2019, munzira yavo kubva kuIran kuenda kuUkraine neCanada. Haizi yemari, asi tinoda kuunza ruramisiro kumhuri dzakabatanidzwa. ”
Himelfarb Proszanski inzvimbo inotarisisa yedhorobha yemutemo muToronto uye yakanangana nekubatsira vatengi kutarisana nenyaya dzakakosha. Yakagadzwa mu1998 naPeter Proszanski naDavid Himelfarb, iyo femu inotarisana nenzvimbo dzinoverengeka dzemutemo dzinosanganisira yemakambani, yekutengesa, franchise, matare ekutengeserana, kubatanidzwa nekutenga, insolvency, real estate, uye inishuwarenzi mutemo.
Mr. Arndt vakati: "Ndege yeUkraine Airlines PS752 yakasimuka kubva kuTeheran Airport musi waNdira 8 munzira dzakanangana neKiev. Ndege yakatevera yavo yekutanga-yakatarwa nzira yekubhururuka. Iyi nzira yakavatora pamusoro pekumisikidzwa kwemauto. "
Pakati pevakafa paive nevatakuri 138 vaidzokera kuCanada, kusanganisira 57 vagari vemuCanada. nevagari vasiri veCanada mundege iyi vanoverengera vadzidzi, vanachiremba, uye vafambi vebhizinesi vanodzokera kuCanada.
Iran yakazobvumidza missile yayo yekudzivirira system yakapfura pasi ndege mushure mekutanga kupomera tekinoroji kana mhosho kukanganisa. Mutungamiriri weIran Hassan Rouhani yakati "chikanganiso chisingakanganwirwi."
Tom Arndt akabvuma ku eTurboNews yakanga iri nhanho yakanakisa yekuti Iran ibvume chikanganiso chavo, uye zvino yave nguva yekuti ndege yekuUkraine ikwire padare kubvuma kuti kubvumira kutiza kwavo kusimuke yaive mhosho huru.
Mutungamiriri weCanada Justin Trudeau ndokuti, "Kupfura pasi ndege isiri yehurumende kunotyisa… Iran tinofanirwa kutora mutoro uzere… Tinotarisira Iran kuripa idzi mhuri. ” Vakuru veUkraine vakadaro Iran inofanirwa kuripa mhuri dzevakabatwa.
Panguva yekudonha, iyo US Federal Aviation Administration yakarambidza ndege dzevanhu kubva kubhururuka pamusoro penharaunda. Mushure mekudzikiswa kweMalasian Airlines Flight 17 muna 2014, ndege zhinji dzinoremekedza zviziviso zveFAA pakuita sarudzo dzekuchengetedza. Ndege dzinoverengeka, dzinosanganisira Air France, Air India, Singapore Airlines, uye KLM, dzakadzosera ndege dzadzo. Dzimwe ndege dzakadai seEmirates neFlydubai dzakakanzura ndege dzese kuenda nekuIran.
eTurboNews mune chinyorwa chekutanga chakaratidza kuti Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, uye Aeroflot vanofanira kugovana. kuzvipindiray neUkraine International Airlines nehurumende yeIran uye vanotora mutoro wechiitiko ichi chinotyisa.
eTN yakaratidza mune chinyorwa: Ukraine International Airlines inogona kunge yakateedzera muenzaniso wevamwe vatakuri venyika dzepasi rose vanosanganisira Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot, Qatar Airways, uye Turkish Airlines avo vasina hanya nenyevero yeFAA ndokuenderera mberi nekushanda kwavo zvisinei nekunyeverwa kuri pachena uye kusingazivikanwe ne FAA. Austrian Airlines, Qatar Airways, uye Aeroflot dzakatoshanda zuva rakatevera tsaona inouraya.
eTurboNews anga abvunza kuti nei ndege dzakaramba dzichibhururuka uye yakanyorwa data yekunyora nendege dzinoshandiswa nevatengesi vekutakura kunyangwe paine njodzi iri pachena.
Paakabvunzwa na eTurboNews kana danho iri ringawedzerwe kune dzimwe ndege, VaArndt vakati, "Tichiri muchikamu chekutanga uye tiri kutsvaga nzira dzese kuti uwane kururamisira mhuri dzakabatana."
eTurboNews akabvunza kuti ndiani achabhadhara mhosva yacho. Mr. Arndt vakapindura: “Hapana mari inobuda muhomwe yemhuri. Akawedzera iyo New York- yakamisikidzwa kukwira kumatare ematare, Galactic Litigation Partners LLC, yabvuma, zvichitenderwa nedare, kupa mari kukirasi kurwisa Iranian Government neUkraine International Airlines. "
Uri kuenda kunotevera hurumende yeUS kutanga kweketani kuita kwezviitiko? eTN yakabvunza. Tom Arndt's Mhinduro yaive, "Panguva ino hatina hurongwa hwekupinza Hurumende yeUS mudare iri."